Fulkaano ayaa ka qarxday meel 40km (25 mayl) u jirta caasimadda Iceland ee Reykjavik - Wardeeq 24 TV Fulkaano ayaa ka qarxday meel 40km (25 mayl) u jirta caasimadda Iceland ee Reykjavik Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Fulkaano ayaa ka qarxday meel 40km (25 mayl) u jirta caasimadda Iceland...
Fulkaano ayaa ka qarxday meel 40km (25 mayl) u jirta caasimadda Iceland ee Reykjavik
Jimcaha, oo leh dhagxaan guduudan oo dhulka ka soo daadanaya iyo iftiin casaan ah oo iftiiminaya cirka habeenka.
Durdurada lafaha guduudan ayaa laga arki karaa iyagoo ka soo baxaya dhul daloola oo ku yaal Geldingadalur, oo u dhow Mount Fagradalsfjall oo ku taal Jasiiradda Reykjanes ee ku taal koonfur-galbeed Iceland, oo ah muuqaal ay duubtay diyaarad helicopter ah.
Iceland: Aafada dalxiiska
Seynisyahanno ayaa ka nixiyay barafka dhalaalaya ee Iceland
Iceland waxay sagootisay barafkii ugu horreeyay ee lumiyay isbeddelka cimilada
In kasta oo Madaarka Caalamiga ah ee Keflavik ee Iceland iyo dekedda yar ee kalluumaysiga ee Grindavik ay u jiraan dhawr kiiloo mitir, haddana aagga lama degganaan karo oo lama filaynin in qarxaasi uu keeni karo wax khatar ah.
“Qarax wuxuu ka bilaabmay Fagradalsfjall oo ku taal Geldingadalur abaarihii 20:45 GMT caawa. Qarxa waxaa loo tixgeliyaa mid yar oo dillaaca dhererkiisu waa qiyaastii 500-700 mitir (1,640-2,300 fuudh). Lava-ga ayaa ka yar 1 kiiloomitir oo laba jibbaaran (0.4 mayl laba jibaaran) cabirka, “Xafiiska Saadaasha Hawada ee Iceland (IMO), oo kormeera dhaqdhaqaaqa dhul-gariirka, ayaa lagu yiri hadal uu soo saaray.
“Wax yar oo dhaqdhaqaaq ah ayaa ka jira aagga.”
Goobta uu ka qarxay waa dooxada, oo qiyaastii 4.7km gudaha ka jirta xeebta koonfureed ee jasiiradda.
Booliska iyo saraakiisha ilaalada xeebaha ayaa u orday goobta, laakiin shacabka ayaa lagula taliyay inay ka fogaadaan wadada weyn ee ka timaada gobolka caasimada ee aada garoonka diyaaradaha Keflavik ayaa si kumeel gaar ah loo xiray jimcihii.
Nasasho 900 sano
Ma jiraan wax warbixino ah oo ku saabsan dhicitaanka dambaska, in kasta oo tephra – la adkeeyay jajabyada dhagaxa magma – iyo qiiqa gaaska ayaa la filayay
Booliska ayaa ku amrey dadka degan bariga foolkaanaha inay xiraan daaqadaha isla markaana ay ku ekaadaan guryahooda sababo la xiriira halista wasaqowga gaaska ee ay waddo dabayshu
Qiiqa gaaska – gaar ahaan baaruud dioxide – waa la sarreyn karaa agagaarka isla markiiba fulkaanaha, waxaana laga yaabaa inuu halis u galo caafimaadka oo xitaa uu u dhinto.
Wasakhowgu wuu dhaafi karaa xadka la aqbali karo, xitaa meel fog, iyadoo kuxiran dabaysha.
Qaraxii Jimcaha wuxuu ka dhacay nidaamka fulkaanaha ee Krysuvik, oo aan lahayn volcano dhexe.
Burburka ka jira gobolka waxaa loo yaqaan qarxis wax ku ool ah, halkaasoo lafaha si tartiib tartiib ah uga soo baxaan dhulka, kana soo horjeedaan kuwa qarxa ee daruuraha ash ku shuba cirka sare.
Previous articleDowladda Oo Sheegtay In Ay Qalabeynayso Ciidamo Lagu Tababarayo Deegaanada Galmudug
Next articleMadaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa shaqada ka eryay gudoomiyihii bangiga dhexe kadib markii ay sare u kacday